Kooxaha Iibinta Malooga Baahan Yahay? | Martech Zone
Kooxaha Iibinta Malooga Baahan Yahay?
Jimco, Juun 6, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Waxaan ku dhacay inaan arko natiijada codbixinta Iibinta oo waxaan ku dhacay istaroog markaan arkay natiijada. Su’aashu waxay tahay Waa in Kooxaha Iibinta Blog? Waa kuwan natiijooyinka:
Ma igu kalsoon tahay? Shirkadaha 55.11% u diidaan dadkooda iibka inay wax ku qoraan? Marka hore… haddii taasi ay tahay kiiska shirkad aan ka fikirayo inaan ganacsi la yeesho, taasi waa ku filan tahay in maskaxdayda la beddelo. Waa tan sababta:
daacadnimo - Asal ahaan, tani macnaheedu waa in iibiyaasha aan lagu kalsoonaan karin inay khadka tooska ah kula xiriiraan. Hadday sidaas tahayna, waxay u badan tahay inaysan si daacad ah ula xiriirin qadka.
Positioning - Haddii ay jiraan koox dad ah oo ka tirsan ururkaaga oo loo dhisay inay wax ku qoraan, waa dadka wax iibiya. Shaqaalaha iibkaagu waxay fahmayaan meelaynta alaabtaada, tartankaaga, awoodahaaga, daciifnimadaada - waxayna fahansan yihiin sida loola macaamilo jawaab celinta xun.
dhegeystayaasha - Dhageystayaashaada bartaada ayaa ah rajooyin isku mid ah oo shaqaalahaaga iibka ahi ay kula xiriiraan maalin kasta!
Blog-kaaga waa iibiya. Rajada ayaa soo booqaneysa bartaada internetka iyagoo raadinaya isla jawaabaha iyo baaritaanka isla arrimaha ay sameyn lahaayeen markii ay taleefanka kula soo xiriiraan iibiyahaaga. Ka mamnuuca iyaga gabi ahaanba waa wax lagu qoslo. Haddii aadan ku aamini karin iibiyaha inuu qoro boostada blog, waa inaadan aaminin inay la hadlaan rajo.
Anigu ma ahan mid aan macquul ahayn, miyaan? Haddii kooxdaada suuqgeyntu ay farsameynayaan farriinta oo ay riixayaan astaanta, dadka xiga ee safka ugu jira inay heshiiska xiraan waa kuwa wax iibiya. Maaha doqon, waan ogahay inay jiraan waxyaabo aanad doonaynin inuu iibiyuhu ku dhaho baloogaga competition sida tartanka badmouthing ama iibinta muuqaalka weyn ee soo socda ee soo ifbaxaya… laakiin taasi waxay uun u qaadanaysaa xoogaa jihada kooxdaada isgaarsiinta suuqgeynta ah. .
Tani waa sabab kale oo weyn oo darbiga u dhexeeya iibka iyo suuqgeyntu u baahan yahay in la jajabiyo. Aynu ka takhalusno CMOs iyo VP-yada iibka una gudubno a Sarkaalka Sare ee Dakhliga halkaas oo istiraatiijiyado la soo saaray oo la geeyay - dadka go'aannada gaarayana lagula xisaabtamo natiijooyinka dhaqaale.
Tags: madaxa suuq geyntasarkaalka dakhligacmoiibinta bloggingmadaxweyne kuxigeenka iibkaiibinta iibka
Sidee ayuu Klout u shaqeeyaa?
Maxay Tahay Istaraatiijiyad Suuq Geyn Leh?
Jul 11, 2012 markay ahayd 11:01 AM
Si aan uga jawaabo bal in iibku faa'iido leeyahay iyo in kale, jawaabahaygu waxaa dhiirrigeliyay Meg Ryan oo ah "Markii Harry Met Sally." HAA! HAA! HAA!